Home News War Deg Deg ah:-Doorashada K/Galbeed oo mar kale dib loo dhigay
War Deg Deg ah:-Doorashada K/Galbeed oo mar kale dib loo dhigay
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay ayaa soo sheegaya in maanta la sheegay iney mar kale dib u dhacday doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed Soomaaliya oo la filayey iney qabsoonto 5ta bishaan afar maalmood kadib sidii ay hore u shaaciyeen Xubnaha Gudiga doorashada.
Doorashada ayaa qorshuhu ahaa inay dhacdo 5-ta Bishan Decembar oo ku began Arbacada soo socota hayeeshee markale dib loo dhigay dhowr sababood oo ay soo bandhigeen Guddiga.
MUQDISHO ONLINE oo soo xiganaysa Xubno ka tirsan Guddiga ayaa sheegay in dib loo dhigay doorashada ayna ka taagan buuq arintaan ku saabsan gudaha gudiga iyo guud ahaan magaalada Baydhabo.
Doorashada ayaa la sheegay inay dhici doonto 19 Decembe
Previous articleVilla Soomaaliya oo ka carootay wareeysi uu VOA-da siiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka+Maxaa ka jira khilaaf hoosaadka Kheeyre iyo Mursal
Next articleMaxaa Baydhabo Ciidanka Federaalka loo geeyey, Garoowe lama geynine.?
Ciidamo Boolis Ah Oo Lageeyay Deegaano Katirsan Gobolka Sh/hoose